विमानस्थलमा मन्त्री आलेकाे छड्के चेक : ५० लाख रुपैयाँ सहित १ पक्राउ, धेरै दलालकाे भागाभाग हेर्नुहोस् भिडियो सहित् । - nepal day
विमानस्थलमा मन्त्री आलेकाे छड्के चेक : ५० लाख रुपैयाँ सहित १ पक्राउ, धेरै दलालकाे भागाभाग हेर्नुहोस् भिडियो सहित् ।
प्रकासन मिति : २४ पुष २०७८, शनिबार १२:२०
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सौर्य एयरलाइन्सकी कर्मचारी स्रोत नखुलेको ५० लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेकी छिन् ।
शनिबार विराटनगरबाट काठमाडौं आउँदै गरेको विमानमा अवैध रकम राखिएको भन्ने सूचनाका आधारमा विमानस्थल प्रहरीले एयरलाइन्सकी कर्मचारी रेखा शाक्य पोखरेललाई रकमसहित पक्राउ गरिएको हो ।
बुद्धिजीवी को हुन् ?
सत्यको पक्षधर भएर समाजमा बौद्धिक गतिविधि गर्ने तथा लेखेर, बोलेर या अन्य माध्यमबाट राज्यलाई सघाउने र समाजका सकसहरूलाई निकास दिन योगदान गर्नेहरूलाई बुद्धिजीवी भन्न सकिएला ।
पुस १८, २०७८ वीणा झा
प्रायः विभिन्न सामाजिक अवस्थाको निर्माण र तिनले पार्ने प्रभावहरूबारे गरिने विश्लेषण र छलफलहरूमा, आशा र अपेक्षाका साथ प्रयोग गरिने ‘बुद्धिजीवी’ शब्दको खपत बढ्दो छ । जबजब समाज सकसमा हुन्छ, त्यति बेला बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह नगरेको आरोप पनि लगाउने गरिन्छ । तर ‘बुद्धिजीवी’ भनेका को हुन् त ? विश्वका विभिन्न उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र हासिल गरेका र प्राप्त ज्ञानलाई आफू र आफ्नाका अनुकूलता अनुसार प्रयोग गर्ने जमात ?
सर्वस्वीकार्य तथ्य हो, मानिस पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छैन । विश्वदेखि राज्य र समाजसम्मले अँगालेको हरेक प्रणालीको प्रभाव मानिसको सोच्ने शैलीदेखि सम्पूर्ण व्यक्तित्व निर्माणसम्ममा परेको हुन्छ, चाहे त्यो आर्थिक होस् वा राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक र साहित्यिक । ती सबैले कुनै न कुनै रूपमा मानिसको सोच निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा योगदान गरेकै हुन्छन् । त्यसैले बुद्धिजीवी निर्माणमा आवश्यक वातावरण बनाउनमा राज्यको भूमिका र योगदान निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।